यदि रवि लामिछाने दोषी ठहरिए कस्तो र कति बर्ष सजाय हुन्छ? – PanchKhal Online
Home/समाचार/यदि रवि लामिछाने दोषी ठहरिए कस्तो र कति बर्ष सजाय हुन्छ?
काठमाडौं : पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको प्रक*रणमा प्रहरीले टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई बिहीबार साँझ प*क्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र महानगरीय प्रहरी परिसर, अप*राध महाशाखा काठमाडौंको टोलीले लामिछाने कार्यरत ‘न्यूज २४ टेलिभिजन’को कार्यालय परिसरबाटै रवि र उनका सहयोगी युवराज कँडेललाई पक्राउ गरेको हो। यसअघि बिहीबार दिउँसो नै पत्रकार पुडासैनीले आ८त्मह८त्या गर्नुअघि खिचेको भिडियोमा नाम लिइएकी ओखलढुंगाकी अस्मिता कार्की ‘रुकु’लाई प*क्राउ गरिएको थियो।
प्रहरीको टोली रवि र युवराजलाई प*क्राउ गर्न जिल्ला अदालत चितवनको प*क्राउ पूर्जी लिएर टेलिभिजनको कार्यालय रहेको काठमाडौंको पानीपोखरी पुगेको थियो। दुवैजनालाई थप अनुसन्धानका लागि आजै चिवतन लगिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले पुडासैनीले आ८त्मह८त्या गर्नुअघि नाम लिइएका तीनैजनालाई प*क्राउ गरिएकाले अब अनुसन्धानले तीव्रता पाउने बताएका छन्।
पुडासैनीको मोबाइल फोन र त्यसमा रहेका अडियो, भिडियोको ल्याब रिर्पोट बिहीबार चितवन पुगेपछि प्रहरीले तीनैजनालाई प*क्राउ गरेको हो। एसपी मल्लका अनुसार तीनैजनामाथि पुडासैनीलाई आ८त्मह८त्या गर्न दुरुत्साहन गरेको र त्यस्तो काम गर्नसम्मको परिस्थिति खडा गरेको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाइने भएको छ। उनले यस प्रकरणमा कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गर्ने बचनबद्धता पनि गरेका छन्।
के भन्छ कानुन? मुलुकी फौजदारी संहिता १८५.२ मा आ८त्मह८त्या गर्न दुरुत्साहन दिने र त्यस्तो काम गर्नसम्मको परिस्थिति खडा गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। यो प्रकरणमा आ८त्मह८त्या गर्नुअघि पुडासैनीले रवि, युवराज र अस्मिताका कारण गर्न बाध्य भएको भनेकाले त्यो कुरा पुष्टि भएमा कम्तिमा ५ वर्ष जेल सजाय हुनेछ। प्रहरीले तीनैजनालाई मुलुकी फौजदारी संहिता दफा १८५ अनुसार अपराध गर्न दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा प*क्राउ गरेको हो।
पुडासैनीसँग उठबस भएको भनिएकी अस्मिता (रुकु) कार्कीलाई प्रहरीले बिहीबार बिहानै प*क्राउ गरेर चितवन लगिसकेको छ। फौजदारी अभियोगमा प*क्राउ परिसकेपछि २४ घण्टाभित्र अदालतको म्याद लिएर न्यायिक हिरासतमा राखिसक्नुपर्छ। विद्यमान कानुनअनुसार प्रहरीले रविसहितलाई २५ दिनसम्मको न्यायिक हिरासतमा राखी मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्छ। थाहा खबर